Nooca cusub ee KDE Plasma 5.16 ayaa yimid oo kuwanu waa warkiisa | Laga soo bilaabo Linux
Nooca cusub ee KDE Plasma 5.16 ayaa hada la soo saaray, oo lagu abuuray KDE Frameworks 5 platform iyo maktabada Qt 5 oo leh OpenGL / OpenGL ES. Meeshan qaybtaan cusub ee KDE Plasma ay ka jiraan horumarin cusub oo deegaanka ah.
inta u dhaxaysa horumarka ugu weyn ee aan ka heli karno hagaajinta nidaamka ogeysiinta, Wax ka beddelka naqshadda shaashadda guriga, taageerada Wayland, iyo waxyaabo kaloo badan.
1 Maxaa ku cusub KDE Plasma 5.16
1.1 Iskuxirnaanta qaabeynta qalabka widget
1.2 Server Graphic
1.3 Xarunta Rakibidda Barnaamijyada iyo Wax-ku-xidhka
Maxaa ku cusub KDE Plasma 5.16
Marka la sii daayo nuucaan cusub waxaan ku iftiimin karnaa taas Maareynta desktop-ka, waxyaabaha garaafka iyo wijiyadaha ah ayaa la horumariyay.
Sidaas oo kale ayaa ah nidaamka ogeysiiska oo gebi ahaanba dib loo qoray. Ha dhibin qaabka ayaa lagu daray si ku meelgaar ah u jooji ogeysiisyada, hagaajinta isku duubnaanta diiwaanka ee ogeysiisyada taariikhda soo dhaweynta, illaa iyo inta ogeysiisyada muhiimka ah la soo bandhigi karo marka codsiyada ay ku socdaan qaabka shaashadda oo buuxa, nuqul feyl oo guji dhammeystirka, qaybta ogeysiinta dejinta ee qaabeynta ayaa la ballaariyay.
Iskuxirka xulashada mawduucyada waxaa loo hirgaliyay in si sax ah loogu dabaqo mowduucyada looxyada. Astaamo cusub ayaa loogu daray mowduucyada, oo ay kujirto taageerada go'aaminta saacadda analogga iyo cilladaha soojireenka ah ee mawduucyada.
Qaabka tafatirka gudiga, badhanka "Show Alternatives ..." ayaa soo muuqday, kaa oo kuu ogolaanaya inaad si dhaqso leh ugu wareejiso wijetiga waxyaabaha jira.
Naqshadda shaashadda soo galitaanka iyo bixitaanka ayaa wax laga beddelay, oo ay ku jiraan badhannada, astaamaha iyo sumadaha;
Iskuxirnaanta qaabeynta qalabka widget
Qalabka si loo go'aamiyo midabka pixels aan macquul ahayn ee shaashadda waxay ku dartay taageerida midabada dhaqaaqa tifaftirayaasha qoraalka iyo tifaftirayaasha garaafyada.
Waxaa lagu daray tilmaame waxqabad duubitaan codsiyada codsiyada sariirta sistemka, taas oo aad si deg deg ah ugu badali karto mugga mootada jiirka ama aad codka ku aamusin karto badhanka jiirka dhexe.
Daaqadda oo ay ku jirto astaamaha miiska desktop-ka, qaabka isdabajoogga, sawirrada tilmaamaha la xushay waxaa lagu soo bandhigayaa karti ay ku xakameyn karaan calaamadeynta
Liiska macnaha guud ayaa dib loo qaabeeyey maareeyaha hawsha oo lagu daray taageerada dhaqsaha u wareejinta daaqada wixii kumbuyuutar kumbiyuutar ah oo kan hadda socda adigoo gujinaya badhanka jiirka dhexe.
Mawduuca 'Breeze' ee loogu talagalay hooska daaqadaha iyo menus, adeegsiga madow ayaa la soo celiyay, iyadoo la hagaajinayo aragtida waxyaabo badan markii la isticmaalayo qorshooyinka midabka madow
Isbadal kale oo muhiim ah ee KDE Plasma 5.16 waa hirgelinta taageerada bilowga ah ee fadhiga ku saleysan Wayland markaad isticmaaleyso wadayaasha lahaanshaha NVIDIA.
Nidaamyada leh darawal gaar u ah NVIDIA oo wadata Qt 5.13 sidoo kale waxay leeyihiin arrimo laxiriira jaantusyada ka dib markay ka soo laabtaan habka hurdada
Fadhi ku saleysan Wayland, waxay u muuqatay iyadoo jiidaya oo la ridayo daaqadaha dalabka iyadoo la adeegsanayo XWayland iyo Wayland.
Iyadoo taas leh dib loo eegay mowduucyada qaabka horudhaca ee shaashadda gelitaanka goobaha iyo ikhtiyaar reboot ah ayaa lagu daray bogga Fadhiyada Fadhiga (Fadhiga Hawlaha) bogga oo u gudbaya qaabka qaabeynta qaababka UEFI.
Iyo sidoo kale taageero buuxda oo loogu talagalay astaamaynta taabashada markii la isticmaalayo darawalka Libinput ee X11.
Xarunta Rakibidda Barnaamijyada iyo Wax-ku-xidhka
Bogga leh cusbooneysiinta codsiyada iyo xirmooyinka, astaamaha shaqsiyeed hadda waa la "soo dejiyey" oo "waa la rakibay".
Tilmaamuhu wuxuu ka fiicnaaday dhammaystirka hawlgallada, wuxuu kudaray khad buuxa si loo qiimeeyo horumarka ficilka. Markaad hubineyso cusbooneysiinta, tilmaamaha "Mashquul" ayaa la bixiyaa;
Taageero lasaaray iyo isku halaynta xirmooyinka qaabka AppImages iyo codsiyada kale ee kujira tusaha store.kde.org.
Waxaa lagu daray ikhtiyaar aad uga baxdo barnaamijka kadib markaad dhameyso howlaha rakibida ama kor u qaadida.
Meelaha «Ilaha», soo bandhigida nambarka noocyada codsiyada laga heli karo rakibidda laga helay ilo kala duwan ayaa lagu daray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Nooca cusub ee KDE Plasma 5.16 ayaa yimid oo kuwanuna waa warkiisa
Mozilla waxay rabtaa inay bixiso noocyada Premium ee adeegyadeeda Firefox